HACCP China & ISO9001 လေ့လာမှုအစီအစဉ်၏လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ - စီးပွားရေးသတင်း - NANTONG CHITSURU FOODS ။ , LTD ။
HACCP China & ISO9001 လေ့လာမှုအစီအစဉ်၏လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
အချိန် - 2017-12-26 hits: 117
HACCP China & ISO9001 လေ့လာမှုကာလ ၂၃.၁၂.၂၀၁၇ မှ ၂၄.၁၂.၂၀၁၇ ၏လေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ
မာတိကာ HACCP & ISO 9001 လေ့လာရန်နိဒါန်း
၁။ HACCP - အန္တရာယ်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်ဝေဖန်ထိန်းချုပ်ရေးအချက်များ
၂။ ISO2၏အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စံနှုန်းများသည်အဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောပြဌာန်းချက်နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။
၂။ HACCP စနစ်အသုံးပြုရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များ
၃။ သင်တန်းနှင့်ပညာရေး - ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့် HACCP သည်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ရမည်၊ ၎င်းသည်စနစ်တကျလည်ပတ်စေရန်လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်မှုများကိုသင်ယူရမည်။ ထို့အပြင် CCPs ကိုထိန်းချုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများလည်းပေးရမည်။
၄။ လျှောက်လွှာ - HACCP ၏အခြေခံမူအားလျှောက်ထားရာတွင်အောက်ပါအဆင့် ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည်။
9001 စံအတွင်းခက ISO4မိသားစု
၁။ ISO1: ၂၀၁၅ အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် - အခြေခံနှင့်ဝေါဟာရ။
2. ISO9001: 2015 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် - လိုအပ်ချက်။
၃။ ISO3: ၂၀၀၉ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်စွာစီမံခန့်ခွဲခြင်း။
4. ISO19011: 2011 ခုနှစ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်စာရင်းစစ်လမ်းညွှန်။
အခြေခံမူခုနစ်ခုနှင့်အညီ HACCP လေ့လာမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။ ဤအခြေခံမူများကိုစစ်ဆေးခြင်းသို့မဟုတ်စာရင်းစစ်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်သည်။ ဤမူများကိုလိုက်နာရန်ပျက်ကွက်ပါက HACCP လေ့လာမှုကိုပျက်ပြယ်စေပြီးစစ်ဆေးမှုတစ်ခုအတွင်းမှတ်ချက်ရေးဆွဲလိမ့်မည်။
2. ISO 9001 အပေါ်အခြေခံပြီးအရည်အသွေးအဓိပ္ပာယ်
Nantong Chitsuru Foods Co. , Ltd. မှ QC ၏စီမံခန့်ခွဲမှုသည် HACCP & ISO 9001 အစီအစဉ်အတွက်ခရစ်စမတ်တနင်္ဂနွေသင်တန်းတက်သည်။ မစ္စတာဝမ်အား ၂ ရက်ကြာလေ့ကျင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ကိုပိုမိုနားလည်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောဆက်သွယ်ရေးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင် Chitsuru ၀ န်ထမ်းအားလုံးသည်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏လေ့လာမှုသင်တန်းတွင်မကြာခဏတက်ရောက်ရမည်။
အစားအစာလုံခြုံမှုသည်ထုတ်လုပ်သူများ၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ များစွာသောဖြစ်ရပ်များတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတာ ၀ န်ကိုထမ်းဆောင်ရမည့်သက်ဆိုင်သူများအကျိုးစီးပွား၊ အရင်းအမြစ်များမလုံလောက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ဦး စားပေးလုပ်ငန်းများကိုနောက်ကွယ်တွင်လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည်ထုတ်လုပ်သူများအားအေဂျင်စီအားလျင်မြန်စွာပြောင်းလဲနေသောကမ္ဘာတွင်၎င်း၏စားနပ်ရိက္ခာဘေးကင်းရေးမစ်ရှင်ကိုပိုမိုထိရောက်ထိရောက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့်လုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ရှေ့သို့ နှစ်သစ်ကူး၊ 2018 တွင်အနာဂတ်သစ်
နောက်တစ်ခု: မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုတင်းကျပ်စေခြင်း၊ စားသုံးသူများအတွက်စားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုပိုမိုမြင့်မားစေခြင်း